फोहरको व्यवस्थापन नयाँ ढंगबाट
शालिग्राम नेपाल नारायणगढ, १७ असार । नगर क्षेत्रमा निस्कने फोहरलाई छिटो उठाएर व्यवस्थापन गर्नको लागि भरतपुर उपमहानगरपालिकाले नयाँ ढंगबाट काम गर्ने तयारी गरेको छ । फोहर निस्कने तर उठाउन समस्या भइरहने भएपछि उपमहानगरपालिकाले कम जनशक्ति लाग्ने प्रविधिसहितको व्यवस्था गर्न थालेको हो । यस अगाडि ठेकेदारमार्फत उठाउँदै आएको फोहर व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका र दुई वटा ठेकेदारले काम गर्ने भएपछि काम चुस्त हुने भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले जानकारी दिए । ‘यस अगाडि ट्याक्टरले उठाउँदै आएको फोहर अब कम्प्याक्टरले उठाउनेछ’ कार्यकारी अधिकृत बरालले भने, ‘यो साधनले एकै पटकमा धेरै फोहर उठाउने भएकाले काम छरितो हुनेछ ।’ पोखरा र काठमाडौँमा प्रयोग हँुदै आएको कम्प्याक्टर अब भरतपुर उपमहानगरपालिकाले ल्याउँदैछ । चार वटा ट्याक्टरले उठाउने फोहर एउटै कम्प्याक्टरले उठाउने भएकाले जनशक्ति कम लाग्ने र फोहर चुहिँदै सडकमा खस्ने समस्या हटेर जाने बरालले बताए । घरघरबाट निस्कने, होटल र रेष्टुरेन्टबाट निस्कने फोहरलाई कम्प्याक्टरको माध्यमबाट छिटो उठाएर चोक, चौतारोमा फोहर देख्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म एउटा ठेकेदराले मात्रै फोहर उठाउने ठेक्का पाएकोमा काम प्रभावकारी नदेखिएपछि कामको प्रकृति परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ । साउनदेखि लागु हुनेगरी नयाँ ढंगबाट फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । तीन वटा खण्डमा फोहरमैला उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १ देखि ६ सम्म एउटा ठेकेदार, वडा नं. ७ देखि १२ सम्म अर्को ठेकेदार र वडा नंं १३ देखि २९ सम्म कार्यालयले फोहर उठाउने जिम्मा लिनेछ । दुई वटा ठेकेदार र कार्यालय भएपछि काममा प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको परिणाम राम्रो हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए । भरतपुर उपमहानगरपालिकाभित्र अहिले दैनिक ५० टन फोहर निस्कने गरेको छ । योभन्दा थप फोहर निस्कने भएपनि कार्यालयले लिएको तथ्यांकमा ५० टनमात्र देखिएको भरतपुर उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखाका इन्जिनियर विराट घिमिरेले बताए । ‘अस्पतालजन्य फोहर, घरबाट निस्कने फोहर, कुहिने फोहर र नकुहिने फोहर निस्कने गरेको छ’ घिमिरेले भने, ‘अस्पतालजन्य फोहरलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्नको लागि दीर्घकालीन व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ । अहिले नगर क्षेत्रबाट निस्कने फोहरलाई व्यवस्थापन गरेपछि अस्पतालजन्य फोहरका विषयमा हेर्नेछौँ ।’ नगर क्षेत्रबाट निस्कने फोहरको व्यवस्थापन खर्चमा कार्यालयको ठूलो धनराशी खर्च भएकाले त्यसतर्फ ध्यान गएको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए । उनका अनुसार, वार्षिक रुपमा फोहर उठाएर फाल्नको लागि मात्रै दुई करोड २० लाख खर्च भइरहेको छ । सरसफाई शुल्क भनेर नगरवासीबाट उठाएको रकम वार्षिक ७० लाख रुपैयाँमात्र भएकोले अबको चार वर्षभित्र शुल्कबाटै व्यवस्थापन खर्च पु¥याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । विकास बजेटबाट फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरसफाई शुल्क कडाइका साथ उठाउने भएपछि व्यवस्थापन गर्नको लागि सहज हुने कार्यालयले अनुमान गरेको छ । मेडिकल सिटीको रुपमा विकास हँुदै गएको भरतपुर क्षेत्रमा त्यहाँबाट निस्कने फोहरलाई निजी साझेदारीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए । ‘अस्पतालजन्य फोहर अस्पतालले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यो प्रयास भएको छैन’ उनले भने, ‘अब निजी साझेदारीको प्रयासमा व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ अस्पतालबाट निस्कने फोहरलाई छुट्टै स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्ययन कार्य सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । नगरबाट निस्कने फोहरलाई उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर जलदेवी वन क्षेत्रमा डम्पिङ साइछ बनाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालयका अनुसार, वैदेशिक सहयोगमा प्रविधि ल्याएर व्यवस्थापनको अध्ययन थालिएको छ । हरेक दिन फोहरको मात्रा वृद्धि भइरहेकाले कुहिने फोहरलाई घरमा नै व्यवस्थापन गर्नको लागि नगरवासीलाई अनुरोध गरिएको वातावरण शाखा प्रमुख घिमिरेले बताए । घरमा फोहर व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिलेसम्म दुई हजार रिङ वितरण भइसकेको छ । यस कार्यलाई अझ वृद्धि गर्ने र सचेतनाको कार्यक्रम बढाउने तयारी भएको उनले बताए । प्लाष्टिकको प्रयोग कम गर्न, तरकारी, भात, कागज, खाद्य सामग्रीलगायतका फोहरलाई घरमा नै व्यवस्थापन गरेर करेसाबारीमा मलका रुपमा प्रयोग गर्न समेत सकिने कार्यालयले जनाएको छ । नगर क्षेत्रबाट निस्कने फोहर बिदा र चाडपर्वमा नउठ्ने समस्या अब हटेर जाने कार्यालयले जनाएको छ । अबको तीन महिनाभित्र भरतपुर नगर क्षेत्रमा फोहरको थुप्रो देख्न नपर्ने योजना उपमहानगरपालिकाको छ ।
आकर्षण उखुको रसमा
शालिग्राम नेपाल . ओहो कस्तो गर्मी । गर्मीबाट केही समयको लागि शितलता दिन चिसो पदार्थको चाहना गर्छौं हामी । गर्मी बढेसंगै अहिले चोकचौतारोमा चिसो पेय पदार्थको बिक्री बढेको छ । जाडोमा न्यानो, गर्मीमा चिसो मानिसका मन पर्ने र आवश्यक वस्तु हुन् । चितवन तराइका गर्मी जिल्लामध्येको सूचीमा पर्ने भएकाले यहाँ गर्मी केन्द्रीत सामग्री र पेय पदार्थको बिक्री बढेका छन् । चितवन र आपसापका जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नारायणगढ हो । बजारमा काम सकेर भरतपुर जान हिँडेका वा बजारमा आएकाहरु एकपटक चिसो पेय पदार्थ पिउन रुचाउँछन् । त्यसमा पनि भरतपुरको ओरालोमा बिक्रीका लागि राखिएका उखुको रसको स्वाद नलिएका थोरै होलान् । नारायणगढको बजारमा काम सकेर भरतपुरतर्फ हिँडेका जो कोहीले पनि एकपटक ओरालोमा राखिएका उखुको रस खाने गर्दछन् । भरतपुरको उकालो हिँडेकाहरुको मन उखुको रसमा पुगेर रोकिन्छ । सस्तो र सर्वसुलभ भएपछि सबैको मन आकर्षित भएको छ । भरतपुर दीपेन्द्रचोककी रोजिना घिमिरेलाई पनि ओरालोको उखुको रसले लोभ्याएको छ । “बजारमा किनमेल गरी सकेर घर फर्कदा ओरालोमा आएपछि उखुको रस नखाई मन मान्दैन” उनले भनिन्, “गर्मीको समयमा उखुको रस ज्यादै मन पर्छ । बजारका प्याकेटमा राखेको जुसभन्दा उखुको रस ठीक लाग्छ । स्वास्थ्यलाई ठीक, मनमा आनन्द ।” गर्मी होस् या जाडो, जुस मन पर्ने उनलाई विशेष उखुको रस मन पर्छ । “अन्य ठाउँमा गएको बेला गर्मी लागेमा उखुको रस खान मन लाग्छ” उनले भनिन्, “अन्यत्र पिएको उखुको जुस चितवनकोजस्तो स्वादिलो लाग्दैन ।” उखुको रसप्रति उनको मात्रै चाहना बढेको होइन, बजार आएका अन्य व्यक्तिहरुको पनि उत्तिकै आकर्षण छ । चर्को घाममा हिँड्न छाडेर थकाई मार्दै उखुको चिसो रसमा आनन्द लिनेहरुको संख्या पनि बढेको छ । गर्मी बढेसंगै यसको व्यापार गर्नेहरुलाई पनि फाइदा पुगेको छ । जाडोमा सुस्ताएको व्यापार अहिले बढेको छ । स्कुल, क्याम्पसका अध्ययन गर्ने विद्यार्थी होस्, खेतीकिसानी गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यापार व्यवसाय गर्ने सबैले ओरालोको उखुको रस पिउने गरेका छन् । ओरालोमा १० वर्षदेखि उखुको रस बिक्री गर्दै आएका वीरेन्द्रप्रसादले भने, “यहाँ सबै वर्गका मानिसहरु उखुको रस खान आउने गरेका छन् । गर्मीमा धेरै व्यापार हुन्छ, जाडोमा थोरै । उखुको रसको महत्व बुझेकाले खाने गरेका छन् ।” उखुको रसले हुने फाइदाका विषयमा धेरै मानिसलाई कम जानकारी भएको बताउँदै उनले भने, “कोकाकोला, फ्यान्टा लगायतका चिसो खानुभन्दा उखुको रस राम्रो हो ।” उखुको रस खाँदा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ भन्ने थाहा नपाएर पनि कतिपयले नखाने गरेको उनको भनाई छ । मिनरल वाटरलाई २५ रुपैया तिरेर खानु भन्दा २५ रुपैयामा उखुको रस खानु स्वास्थ्य र शरीरलाई राम्रो हुने उनी बताउँछन् । सिजनमा राम्रो आम्दानी हुने भएपनि बेसिजनमा पनि बिक्री बढ्न सके व्यवसायलाई खोट लगाउन सक्ने अवस्था नहुने उनको भनाई छ । उखुको रस धेरै बिक्री हुने मौसम फागुनदेखि असार महिना हो । साउनदेखि मंसिरसम्म सामान्य र त्यसपछि पुस र माघ दुई महिना कम व्यापार हुने मौसम हो । “जति गर्मी बढ्छ, हाम्रो व्यापार वृद्धि हुन्छ, प्यास नलागेसम्म उखुको रस खाने बानी हामीमा छैन” उनले भने, “बिरामी वा स्वस्थ मानिस सबैको लागि उपयुक्त हुने रस नियमित खाएमा पनि राम्रो हुन्छ ।” ओरालोमा उखुको रस बिक्री गर्दै आएका अर्का हुन् देवेन्द्रप्रसाद । उनकोमा पनि उखुको रस खान आउनेहरु अहिले बढेका छन् । पहिला सडक छेउमा पसल राख्दाको जस्तो व्यापार नभएपनि गर्मीमा अन्य समयभन्दा व्यापार बढेको उनी बताउँछन् । सानो व्यवसाय गरेर बस्दा कमाएको छ भन्दै कर माग्न आएर दुःख दिँदा समस्या भएको उनी बताउँछन् । उनकोमात्र होइन, अहिले गर्मीको सिजनलाई केन्द्रीत गरी राखेका चिसो तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण बढेको छ । चितवन गर्मी जिल्लामा पर्ने र यहाँका बजार गल्लीमा विभिन्न साना ठूला जुस पसल सञ्चालनमा आएकाले व्यवसाय बढेको उनीहरुले बताएका छन् । भरतपुरको वीरेन्द्र क्याम्पस गेट अगाडि रहेको एक जुस सेन्टरमा पनि गर्मी लागेपछि ग्राहकको भीड लाग्ने गरेको छ । “अन्य समयमा पनि बिक्री हुने गरेको थियो” जुस सेन्टरका संचालक भन्छन्, “अहिले गर्मीले जुस र फलफूलको बिक्री बढेको छ । फलफूलको रस बनाएर बिक्री गर्दै आएको जुस पसलमा एक गिलासको लस्सी ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । “धेरै वर्षदेखि यही दरमा बिक्री गरेका छौं, पुरानै मूल्य खोज्छन् ग्राहकले” उनले भने, “चर्को घामले गर्मी बढेपछि जुस खानेहरुको संख्या पनि बढ्ने गर्दछ ।” मिनरल वाटर र चिसो अन्य पेयपदार्थभन्दा फलफूलको जुस खाएमा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने उनको भनाई छ । भरतपुर र नारायणगढका जुस पसलमा मात्र होइन, फलफूल बिक्री गर्दै आएको लायन्सचोकको मण्डीमा पनि बिक्री ह्वात्तै बढेको छ । “गर्मी लागेपछि चिसो पदार्थको व्यापार बढेको छ” खर्बुजा बिक्री गर्दै आएका ती व्यापारीले भने, “भारतबाट आउने खर्बुजाको माग पु¥याउन मुस्किल छ ।” अहिले ३० रुपैयाँ किलोमा बिक्री हँुदै आएको खर्बुजा जति घाम चक्र्यो त्यति महंगोमा बिक्री हुने गरेको उनी बताउँछन् । “नारायणगढबाट नवलपरासी, तनहुँ, गोरखालगायतका जिल्लामा जाने गर्दछन्, आज ल्यायो भोलिसम्म पनि रहँदैन । अब केही समयपछि भुइँकटहर आउँछ । त्यसको पनि माग त्यत्तिकै रहन्छ” उनले भने, “फलफूलको माग बढेको छ । सबैको माग कसरी पु¥याउने भन्ने लागेको छ । गर्मी बढे लगत्तै चिसो हुने फलफूल र जुसको कारोवारमा वृद्धि भएको छ ।” चिसो पदार्थको सेवन गर्नुभन्दा पहिला त्यो कस्तो ठाउँको हो ? सफा गरिएको छ कि छैन ? स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ कि हँुदैन भन्ने विचार गरेर फलफूल सफा गरेर खान चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन् ।
मुग्लिन सडकको असर पर्यटनमा
शालिग्राम नेपाल नारायणगढ, २१ साउन । नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा गइरहने पहिरो र सडक जामको प्रत्यक्ष असर चितवनको पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । भूकम्पले थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उकालो लाग्ने अवस्था आउन थालेपनि सडक बिस्तारको काम गर्न थालिएको मुग्लिनको बाटोमा सवारी जाम हुन थालेपछि समस्या आएको पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘भूकम्पले गर्दा महिनौँ सुनसान रहेको यस क्षेमा बिस्तारै पर्यटक देखिन थालेका थिए, अहिले पुनः पुरानै अवस्था आएको छ’ क्षेत्रीय होटल संघ सौराहका उपाध्यक्ष सुमन घिमिरेले भने, ‘स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकहरु मुग्लिनको बाटोले गर्दा चितवन बसाई रद्द गरेका छन् । बाहिर देशबाट आएकाहरु काठमाडौँ पोखरा हुँदै चितवन आउने गर्दथे ।’ मुग्लिन नारायणगढ सडक बिस्तारको काम र वर्षातमा हुने पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुने समस्याले पर्यटक घटेका छन् । ‘हवाइ मार्गबाट आउनेहरुको संख्या थोरै छ । त्यसमा पनि भरतपुर काठमाडौँ हुने उडानको क्षमता थोरै भएको कारणले पनि एकै पटक धेरै यात्रर बोक्न सक्ने जहाज छैन । धेरै पर्यटक स्थलमार्गबाट आउने हुने गर्दछन्’ घिमिरेले भने, ‘स्थलमार्गमा हुने अवरोधले गर्दा जोखिम मोलेर आउन चाहँदैनन् ।’ विदेशी पर्यटकदेखि स्वदेशी पर्यटकलाई समेत मुग्लिनको बाटोले समस्या भएको उपाध्यक्ष घिमिरेले बताए । भूकम्पपछिका दिनभन्दा अहिले केही सुधारका संकेत देखिएपनि सन्तोष मान्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए । गएको वर्षातको समयभन्दा अहिले सुधार आएको छ तर पनि आशा गरे अनुसारको पर्यटक आउन सकेको छैनन् । ‘स्वदेशी पर्यटक र स्थल मार्गबाट आउन चाहने पर्यटकको लागि मुग्लिन नारायणगढको सडकमा हुने अवरोधले गर्दा असर परेको हो’ घिमिरेले भने, ‘वर्षातको समय होटल व्यवसाय गर्नेहरुका लागि उपयुक्त होइन ।’ अहिले सौराहाका होटल व्यवसायी आन्तरिक व्यवस्थापनमा लागेका छन् । होटलको क्षमता वृद्धि, आन्तरिक सजावट, कोठाको मर्मत, पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नयाँ सुविधा ल्याउने काम भइरहेको उनले बताए । पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका होटलहरुले आफ्नो क्षेत्रमा स्वीमिङ पुल निर्माणको काम गरिरहेका छन् । पुराना यस्ता चार वटा होटलहरुले आधुनिक स्वीमिङ पुल निर्माणको काम धमाधाम गरिरहेको क्षेत्रीय होटल संघले जनाएको छ । सौराहामा अहिले चीन, भारत र केही युरोपियन मुलुकका पर्यटकहरुको चहलपहल भएको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाले जानकारी दिएको छ । पर्यटकको संख्या घटेपछि होटल व्यवसाय चलाउनका लागि समस्या हुन थालेको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका पूर्वअध्यक्ष शंकर सैजुले बताए । ‘पर्यटक आएका छैनन् । यसै क्षेत्रमा लागियो, पेशा छाड्न भएन । कठिनाईका साथ पेशालाई निरन्तरता दिएका छौँ’ उनले भने, ‘मुग्लिनको बाटोमा हुने सडक अवरुद्धले गर्दा चितवन आउन चाहने पर्यटकहरुले पनि चितवन बसाई क्यान्सिल गर्न थालेको छन् ।’ पोखराबाट चितवन आउन चाहने, काठमाडौँहँुदै चितवन आएर पोखरा जान चाहने पर्यटकहरु मुग्लिनको जाममा बसेपछि योजना परिवर्तन गरेर फर्कने धेरै भएको सैजुले बताए । हवाई मार्गबाट आउनेहरुले मात्र होटल व्यवसाय चलाउन नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘स्थल मार्गबाट मात्रै धेरै पर्यटक आउँछन् । एकै पटक दुई, तीन सय जना बोक्ने जहाज भरतपुरमा अवतरण गर्न सक्ने भएमा राम्रो हुने थियो तर त्यो अवस्था छैन ।’ स्थल मार्ग भएर आउनेको लागि समस्या भएपछि अन्तरिक पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटेको उनले बताए । ट्राभल एजेन्सीमार्फत पर्यटक आउने होटलहरुमा केही पर्यटक देखिएपनि अन्य होटलहरु भने सुनसान रहेको होटल व्यवसायी दामोदर रेग्मीले बताए । ‘आन्तरिक पर्यटकको संख्या न्यून छ’ उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजना हुन छाडेको छ । घुम्न, रमाउन आउने स्वदेशी पर्यटक अहिले छैनन् ।’ सौराहामा मात्र होइन, पर्यटकको संख्या चितवनका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि घटेको छ । सौराहापछि विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक आउने पश्चिम चितवनको पटिहानी, मेघौलीका होटलहरुमा पनि असर परेको छ । मेघौलीमा सञ्चालनमा रहको ठूलो लगानीका होटल सिजी रिसोर्ट, बराही जंगल रिसोर्टमा पनि पर्यटकको संख्या न्यून रहेको छ । जुन, जुलाई, अगष्ट महिना पर्यटकको लागि अफसिजन हो । यही समय पारेर होटल व्यवसायीहरुले केही छुटको व्यवस्था गरेपनि पर्यटकको संख्या भने वृद्धि हुन सकेको छैन । ३६ किलोमिटर लामो मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको सुधारको काममा आएको ढिलाईले पर्यटन क्षेत्रसंगै यातायात व्यवसायीलाई समेत प्रभाव पारेको छ । अन्यन्त कामको जरुरी परेर यात्रा गर्नेहरु हवाइ मार्गबाट जान्छन् । थोरै पुँजी हुनेहरु पनि मुग्लिनको बाटोमा आएको समस्याले गर्दा ऋण गरेर हवाइजहाज चढ्न थालेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए । मुग्लिनको बाटो समयमा बन्न नसक्दा धेरै घाटा सवारी साधनलाई भएको उनको भनाई छ । यात्रु पाउन मुश्किल हुने, सवारी चढेर गएकाहरुको पनि यात्रा सन्तोषजनक नहुने भएपछि व्यवसायमा असर परेका हो । काठमाडौँ, पोखरा जाने मुख्य मार्ग मुग्लिन भएको कारण त्यसमा हुने जाम र पहिरोको असर परेका उनले बताए ।